यस मार्गमा दुष्ट केहि आउँछ ... | Martech Zone
मंगलवार, मार्च 11, 2008 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
के तपाईंले कहिले यस्तो भावना महसुस गर्नुभयो कि वास्तवमै केहि खराब हुनेवाला छ?
भिस्टाको स्क्रीनशट मेरो म्याकबुकप्रोमा समानान्तर 3.0. and र ओएसएक्स चितुवाको साथ चालु हुने छ।
टैग: एन्ड्रोइडस्याऊक्रिसमस कार्डग्राहक सेवाखेल विज्ञापनमोबाइल विज्ञापन प्लेटफर्ममोबाइल अनुप्रयोग विज्ञापनसेवासंरचना
के तपाईंको सदस्यता रद्द पृष्ठ यस्तो देखिन्छ?
मार्क्स 11, 2008 मा 4: 32 PM
डग !!!!!! तपाईं एउटा अन्धकार ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ !!!!! 😉
मार्क्स 11, 2008 मा 8: 57 PM
तपाईंले एक ब्लग पोष्टमा मेरो अंग्रेजी कक्षा एक लाइन fom समावेश गर्नुपर्‍यो - सरल! (म्याकबेथ एउटा दुष्ट कारोबार हो जुन म तपाईंलाई भन्छु।)
जे भए पनि, मलाई शंका छ एरो ग्लास VM वातावरण अन्तर्गत काम गर्दछ - मलाई गलत गर्छु भने मलाई सुधार गर्नुहोस्।
मार्क्स 11, 2008 मा 9: 28 PM
समानताहरू यस बर्षको एक रिलीजको आशा गर्दैछ जुन एरोलाई समर्थन गर्दछ! अहिलेको लागि, जानुहोस्।
मार्स 12, 2008 मा 9: 44 एएम
मन्त्रिक शक्तिले तपाईको मेशिनरीको राम्रो शान्तिलाई किन बदनाम गर्नुहुन्छ?!?!
सबैभन्दा खराब .OS.EVAR !!!
मसँग मेरो समानान्तरको साथ XP हुनुपर्‍यो।
मार्स 12, 2008 मा 10: 04 एएम
मलाई पक्का निश्चित छ कि मलाई विस्टा Windows.११, विन्डोज 3.11 and र विन्डोज एमईमा मन पर्छ। Me मलाई गद्दार भन्नुहोस्, तर मलाई वास्तवमा भिस्टा मन पर्छ - हामीले यसलाई मेरो छोराको मेगा प्रणालीमा चलाइरहेका छौं र एरो गजबको छ। ओएस ठोस ठोस पनि छ, हामीसँग कहिले पनि मुद्दा भएको छैन।
मार्स 12, 2008 मा 11: 44 एएम
मलाई भिस्टासँग कहिले पनि कुनै समस्या आएको छैन। म सबै उपद्रव को बारे मा छ देख्दिन।
मार्क्स 13, 2008 मा 8: 36 PM
केही वर्ष पहिले, मैले विन्डोज XP का साथ समस्या बन्द गरें। यो केवल एक साधारण फिक्स ले; पावर प्लग हटाउदै र कुनामा खैरो खैरो बक्स लुकाउँदै। अँध्यारो, अँध्यारो कुना।
एक्स-मास भन्दा पहिले म साँच्चिकै प्रोग्राम प्रयोग गर्न चाहन्थें जसले विन्डोमा मात्र काम गर्‍यो। करीव hours घण्टा बग फिक्सिंग पछि, WinXP पुन: स्थापना गर्न कोशिस गर्दा, मलाई यस्तो अनइन्टुटिभ प्रोग्राम इन्टरफेसको साथ स्वागत गरियो कि मैले पूरै प्रोजेक्ट सँगै छोडे, र म্যাক प्रोग्रामको लागि खुशीसाथ धेरै ठूलो रकम तिरेको छु जुन वास्तवमा काम गर्दछ।
मार्क्स 13, 2008 मा 8: 44 PM
ओहो, गलत लिंक मैले पठाएको भनेको यहाँ छ: